Ọ̀ bụ Chineke Na-akpata Ahụhụ Anyị Na-ata? | Ihe Baịbụl Kwuru
Teta! | Mach 2015
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ahụhụ Ụmụ Mmadụ Na-ata
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ Chineke na-akpata ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata taa. Ha na-ekwukwa na ọ bụrụgodị na ọ bụghị ya na-akpata ya, ahụhụ ndị mmadụ na-ata anaghị emetụ ya n’obi. Baịbụl ọ̀ kwadoro ihe a ha na-ekwu? Ihe Baịbụl kwuru n’okwu a nwere ike ịdị iche n’ihe i chere.
“N’eziokwu, Chineke adịghị eme ihe ọjọọ.”—Job 34:12.
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ihe ọ bụla merenụ bụ uche Chineke. Ihe a ha na-ekwu pụtara na ha kwetara na ọ bụ Chineke ka ahụhụ anyị na-ata si n’aka. N’ihi ya, ọ bụrụ na e nwee ọdachi, ha na-eche na Chineke ji ya na-ata ndị mmehie ahụhụ.
Ihe Baịbụl kwuru na-egosi na aka Chineke adịghị n’ahụhụ anyị na-ata. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na mgbe anyị na-ata ahụhụ, anyị ekwesịghị ikwu na ‘ọ bụ Chineke na-anwa anyị.’ Ọ̀ bụ maka gịnị? Ọ bụ “n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla.” (Jems 1:13) Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụghị Chineke na-akpata ọnwụnwa ndị na-abịara anyị na ahụhụ ndị na-eso ha. Ọ bụrụ ya na-akpata ha, ọ pụtara na ọ bụ onye ọjọọ. Ma, “Chineke adịghị eme ihe ọjọọ.”—Job 34:12.
Ọ bụrụ na ahụhụ anyị na-ata esighị Chineke n’aka, ònyezi ka o si n’aka? Oleekwa ihe na-akpata ya? Ọ dị mwute na mgbe ụfọdụ, ụmụ mmadụ na-emekpa ibe ha ahụ́. (Ekliziastis 8:9) Ihe ọzọ na-akpatara ụmụ mmadụ ahụhụ bụ “ihe a na-atụghị anya ya.” Ihe ọ pụtara bụ na ihe ọjọọ nwere ike ịdabara onye ọ bụla. (Ekliziastis 9:11) Ma, Baịbụl kwuru na ọ bụ Setan bụ́ Ekwensu kacha akpata ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata taa, n’ihi na ọ bụ ya na-achị ụwa a, ụwa dum adịrịkwa n’aka ya. (Jọn 12:31; 1 Jọn 5:19) Ọ bụ Setan na-eme ka ụmụ mmadụ na-ata ahụhụ, ọ bụghị Chineke.
“N’oge niile ha nọ na-ata ahụhụ, ọ nọ na-ewute ya.”—Aịzaya 63:9.
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata adịghị emetụ Chineke n’obi. Dị ka ihe atụ, otu onye na-ede akwụkwọ kwuru na Chineke anaghị emetere anyị ebere ma anyị tawa ahụhụ. O kwukwara na ọ bụrụ na Chineke dị n’eziokwu, ọ ga-abụrịrị na obi tara ya mmiri.
Ihe Baịbụl kwuru na-egosi na obi ataghị Chineke mmiri nakwa na ọ na-emetere ụmụ mmadụ ebere. Ahụhụ anyị na-ata na-emetụ ya n’obi. N’oge na-adịghị anya, ọ ga-akwụsị ha niile. Baịbụl na-akụziri anyị ihe ndị ga-akasi anyị obi ma anyị na-ata ahụhụ. Ka anyị leba anya n’atọ n’ime ha.
Chineke ma na anyị na-ahụsi anya. Jehova * ma banyere ahụhụ niile ụmụ mmadụ na-ata kemgbe ụwa n’ihi na “anya ya nke na-enwu gbaa” na-ahụ ihe niile. (Abụ Ọma 11:4; 56:8) Dị ka ihe atụ, mgbe a na-ata ụmụ Izrel ahụhụ n’Ijipt, o kwuru, sị: “Ahụwo m ahụ́ a na-emekpa ndị m.” Ihe ahụ a na-eme ha metụrụ ya n’ahụ́ n’ihi na o kwuru na ya “maara nnọọ ihe mgbu ha na-enwe.” (Ọpụpụ 3:7) Ihe amaokwu a kwuru gosiri na uche Chineke dị n’ahụhụ ọ bụla anyị na-ata, ya sọkwa ya ya bụrụ na ndị ọzọ amaghị ihe anyị na ya na-alụ ma ọ bụkwanụ na ha aghọtachaghị otú o si na-eme anyị. Ihe a Baịbụl kwuru na-akasi ọtụtụ ndị obi.—Abụ Ọma 31:7; Ilu 14:10.
Chineke na-emetere anyị ebere ma anyị na-ata ahụhụ. Ahụhụ anyị na-ata na-emetụ Jehova Chineke n’obi, ọ bụghị naanị na ọ ma na anyị na-ata ahụhụ. Dị ka ihe atụ, mgbe ndị fere ya n’oge ochie nọ ná nsogbu, ọ dịghị ya mma n’obi. Baịbụl kwuru, sị: “N’oge niile ha nọ na-ata ahụhụ, ọ nọ na-ewute ya.” (Aịzaya 63:9) N’agbanyeghị na o nweghị ebe anyị ruru Chineke eru, ọ na-emetere anyị ebere mgbe anyị na-ata ahụhụ. Ọ na-ewere na ọ bụ ya na-ata ahụhụ ahụ. N’eziokwu, “Jehova nwere obi ọmịiko dị ukwuu, na-emekwa ebere.” (Jems 5:11) Ọ na-enyekwara anyị aka idi ahụhụ anyị na-ata.—Ndị Filipaị 4:12, 13.
Chineke ga-akwụsị ahụhụ niile anyị na-ata. Baịbụl kwuru na Chineke ga-akwụsị ahụhụ niile anyị na-ata. Ọ ga-eji Alaeze ya eme ya. Baịbụl gwara anyị na n’oge ahụ, Chineke ‘ga-ehichapụ anya mmiri niile n’anya ụmụ mmadụ, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.’ (Mkpughe 21:4) Gịnị ka Chineke ga-eme banyere ndị nwụrụ anwụ? Ọ ga-akpọlite ha ka ha biri n’ụwa ebe a. Ha agaghịkwa ata ahụhụ n’oge ahụ. (Jọn 5:28, 29) N’oge ahụ, ànyị ka ga na-echeta ahụhụ anyị na-ata ugbu a? Mba, maka na Jehova kwere anyị nkwa, sị: “A gaghị echeta ihe mbụ niile, ha agaghị abatakwa n’obi.”—Aịzaya 65:17. *
^ para. 13 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.
^ para. 15 Ị chọọ ịma ihe mere Chineke ka ji hapụ anyị ka anyị na-ata ahụhụ na otú ọ ga-esi kwụsị ahụhụ niile anyị na-ata, gụọ akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? isi nke 8 na nke 11. Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Ahụhụ Ụmụ Mmadụ Na-ata
ISIOKWU TETA! A Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru?
ISIOKWU TETA! A Ịkwụwa Aka Ọtọ
ISIOKWU TETA! A Na-ejide Onwe Gị
ISIOKWU TETA! A Agbala n’Èzí
ISIOKWU TETA! A Hụ Ndị Ọzọ n’Anya
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Ị Ga-esi Jide Onwe Gị ma Iwe Bịa Gị
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ahụhụ Ụmụ Mmadụ Na-ata
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Ihe Ị Ga-eme ma Nwa Gị Jụọ Gị Ajụjụ Gbasara Ọnwụ
THE BIBLE'S VIEWPOINT The Mesaya
Amamihe Na-echebe Onye Nwere Ya
Mach 2015 | Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru?
TETA! Mach 2015 | Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru?